သေဋ္ဌိလ၊ အရှင် - ဝီကီပီးဒီးယား
(သိတလ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အရှင် သေဋ္ဌိလ(အင်္ဂလိပ်: The Ven. U Thittila; (အသံထွက်:သစ်ထိလ) ) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု အကျော်အမော်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ကာ ဗုဒ္ဓသာသနာတိုးတက်ပြန့်ပွားရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့သောဆရာတော်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်၍ အပင်ပန်းခံကာ သာသနာပြုခဲ့သည်။ စာကြည့်တိုက်မှူးတာဝန်များ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဘိဓမ္မာကထိကတာဝန်၊ အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းသင်တန်းများ၊ ကျမ်းစာများပြုစုခြင်း စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သလို မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ပြုစုရေး၌လည်းပါဝင်ခဲ့လေသည်။
အရှင် သေဋ္ဌိလလောင်းလျာကို မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ပုတီးကုန်းကျေးရွာ၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၈ ခုနှစ် ၊ ဒုတိယ ဝါဆိုလဆန်း (၁)ရက် (ခရစ် ၁၈၉၆ ခု ၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်) သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်းသုံးဦးအနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်၍ ငယ်မည်မှာ မောင်ခင်ဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါးမှာ ရိုးရာတောင်သူများဖြစ်ကြသော ဦးအေးနှင့် ဒေါ်ထွေးတို့ဖြစ်၏ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဘုရားသွားကျောင်းတက် ဥပုတ်သီတင်းတည်သော သူများလည်းဖြစ်ကြသည်။ သုံးနှစ်သားလောက်တွင်ပင် ဖခင်အနိစ္စရောက်သည်။ ကိုးနှစ်အရွယ်၌ အကိုဖြစ်သူကွယ်လွန်ခဲ့၍ ဆယ့်လေးနှစ်သားတွင် အမသေဆုံး၏ ။ မိခင်မှာ သမားတော်တစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ထပ်ပြုသော်လည်း ထိုသူသည် မကြာမီဆုံးပါးသွားခဲ့၏ ။ ခုနစ်နှစ်ရှစ်နှစ်သားအရွယ်လောက်ရောက်သောအခါ ရွာဦးကျောင်းဖြစ်သည့် ပုတီးကုန်းကျောင်းတိုက်သို့ နေ့စဉ်နီးပါးသွားလာခဲ့ကာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဦးကဝိန္ဒက မောင်ခင်နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအား ကျမ်းစာတစ်ချို့သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၁၂၇၁ ခုနှစ်တွင် ပုတီးကုန်း ဆရာတော် အရှင် ကဝိန္ဒကို ဥပဇ္ဈယ်ပြု၍ ရှင်သာမဏေဖြစ်သည်။ ထိုပဗ္ဗဇ္ဇရှင်သာမဏေဖြစ်သောအခါတွင် ရှင်သေဋ္ဌိလသည် အသက် (၁၃)နှစ်သို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်သည်။
သာမဏေဘဝ၌ ဦးကဝိန္ဒ ထံတွင် သင်္ဂြိုဟ်ပါဌ်အနက်နှင့် အခြေခံသဒ္ဒါများသင်ကြားပြီးနောက် မဟာသတိပဌာနသုတ္တန်ကို သင်အံ့ခဲ့သည်။ အသက် (၁၄)နှစ်ခန့်တွင် ပုတီးကုန်းရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက် ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းအနီး တောနက်တစ်ခုသို့ အရှင်ကဝိန္ဒက ရှင်သေဋ္ဌိလအပါအဝင် သာမဏေငါးပါးအားခေါ်ဆောင်၍ တောထွက်ခဲ့သည်။  ထိုတောသည် ခွေးအများ၊မြွေများပေါသည်။ ထိုတောထဲ၌ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းလေး (၅)ကျောင်းရှိ၏ ။ ငယ်ရွယ်သူ သာမဏေ​လေးများမှာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အိပ်စက်ကြရသည်။ ဆရာတော် သင်ကြားသည့်အတိုင်း ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ကြရသည်။ ကာလတစ်ခု၌ ရေကြီးသဖြင့် သစ်ပင်များပေါ်သို ခေတ္တခဏမျှလည်းတက်နေခဲ့ကြရရှာသည်။ ဆရာတော်ကဝိန္ဒ သည် သာမဏေများကြောက်ရွံ့စိတ်များ ပြေလျော့စေရန် ရံခါ၌ ထေရဂါထာလာ စာသားတစ်ချို့ကို ပြန်လည်မိန့်ကြားပြောပြခဲ့၏ ။
အရှင်ကဝိန္ဒသည် ထိုသာမဏေများကို ယခုထက်ပို၍ စာပေသင်အံ့စေချင်သည်။ ရှင်သေဋ္ဌိလသည် တောင်ငူမြို့ ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက် အရှင် သုန္ဒရထံသို့ရောက်ရှိကာ သဒ္ဒါ၊ သင်္ဂဟ၊ ဘေဒစိန္ဒာ၊ ဆန်းကျမ်းများ၊ ပုဒ်စစ်နှင့် မာတိကာ၊ ဓာတုကထာကျမ်းများကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ အသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်တွင် အရှင် သုန္ဒရ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မန္တလေး မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က "ရဟန်းမှန်လျှင် မန်းပြန်မှ"ဟူသော စကားစုတစ်ခုရှိလေသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ မန္တလေးမြို့၌ စာပေမသင်ဖူးလျှင် စာမတတ်သေးပါဟု အထင်အမြင်မျိုးလည်းခဲ့ဖူး၏ ။ ထိုစဉ်အချိန် ဆရာတော် အာဒိစ္စဝံသမှာ မစိုးရိမ်ကျောင်း၌ စာပေပို့ချနေပြီး ပို့ချရာ၌ လိုရင်းဖြင့် ပြတ်သားပေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အရှင်အာဒိစ္စဝံသထံ တပည့်ခံကာ စာပေများကို ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ အရှင်အာဒိစ္စဝံသထံ၌ ရူပသိဒ္ဓိ၊ ဘေဒစိန္တာ၊ ကစ္စယနသာရ၊ သဒ္ဒဝုတ္တိ၊ ဘဒ္ဒဗိန္ဓု၊ ဆန်းအလင်္ကာနှင့် ဒွေမာတိကာ၊ ယမိုက်(၁၀)ကျမ်း၊ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းစသည်တို့ကို သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ထိုအကျိုးကြောင့် ပထမပြန်စာမေးပွဲများဖြစ်သော ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီးစာမေးပွဲများကို လွယ်ကူစွာ အောင်မြင်ခဲ့၏ ။ ပထမကြီးမဖြေမီ ဆရာတော်အာဒိစ္စဝံသနှင့် အတူ အောက်မြန်မာပြည် မော်လမြိုင်သို့ သွားရောက်ခဲ့၏ ။ ၁၉၁၆ မော်လမြိုင်တွင် ကြံခင်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးဥက္ကာသကို ဥပဇ္ဈာယ်ထား၍ ရဟန်းပြုခဲ့သည်။ ၁၂၅၉တွင် အရှင်အာဒိစ္စဝံသနှင့်အတူပင် မြို့တော် ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်၌ ရှိစဉ် ရန်ကုန်မြို့က စေတီယင်္ဂဏစာမေးပွဲနှင့် မန္တလေးမြို့က သကျသီဟ ပရိယတ္တိသာသနဟိတစာမေးပွဲများဖြေဆိုရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၈ခုနှစ်တွင် အစိုးရပထမကျော်အောင်မြင်ခဲ့၏ ။ ဤအောင်မြင်မှုသည် အရှင်သေဋ္ဌိလအတွက် နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲများအောင်မြင်စေရန် စာပေလေ့လာမှုအဟုန်ကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၂၃ရောက်သောအခါ အခက်ခဲဆုံးစာပြန်ပွဲဖြစ်သည့် မန္တလေး ပရိယတ္တိသာသနာ့ဟိတစာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုသူ တစ်ရာ့ငါးဆယ်၌ အောင်မြင်သူလေးယောက်ထဲပါဝင်နိုင်ခဲ့ကာ ပရိယတ္တိသာသနာ့ဟိတ ဓမ္မာစရိယာဘွဲ့တံဆိပ် အပ်နှင်းခံရသဖြင့် သေဋ္ဌိလာဘိဝံသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။  
ဤသို့ဖြင့် ရှင်သေဋ္ဌိလသည် အရှင်အာဒိစ္စဝံသတည်ထောင်သော ကျောင်း၌ ဒုတိယနာယကစာချဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူရင်း စာပေလိုက်စားသည်။ ဗဟန်းကျောင်းဆရာတော် ရွှေကျင်တိုက်၏ မှန်ကျောင်းဆရာတော် အရှင် ဉာနိန္ဒာသဘ ထံပါးတွင်လည်းစာပေများလေ့လာသင်ယူခဲ့၏ ။ ထို့နောက်မန္တလေးသို့ သွားရောက်ပြီး ခေမာသီဝံ ဆရာတော်၊ ဘုရားကြီးတိုက်ဆရာတော် ဦးဉာဏတို့၏ သင်ကြားပို့ချမှုခံယူသည်။ မန္တလေးတွင် တစ်နှစ်ခြောက်လခန့်ကြာမြင့်ပြီးနောက် ရန်ကုန် အရှင်အာဒိစ္စဝံသထံမှောက်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့လေသည်။  အင်္ဂလိပ်စာကို စတင်သင်ကြားသည်။ ထိုခေတ်ကာလများ၌ ရှေးဆန်သူအသိုင်းအဝိုင်းများက ရဟန်းများ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသော အချိန်လည်းဖြစ်၏ ။ သို့သော် ဇွဲမလျှော့ဘဲ ရသမျှကိုသင်ယူရင်း အင်္ဂလိပ်စာအတော်အတန်နားလည်တတ်ကျွမ်းလာသည်။
၁၂၈၆၌ အိန္ဒိယသို့သွားရောက်ကာ ဒေါက်တာတဂိုး၏ သန္တိနိကေတံရှိ တက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် သက္ကဋစာပေကိုတစ်နှစ်ကြာလေ့လာသင်ကြားခဲ့သည်။  တစ်နှစ်ခန့် အိန္ဒိယတွင်နေထိုင်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့ရသည်။ အရှင်အာဒိစ္စဝံသပြည်ပ ကြွသွားသောကြောင့် ကျောင်းတိုက်ကို အခြားဆရာတော်တစ်ပါးနှင့်အတူ တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်။ ငါးနှစ်ခန့်အကြာတွင် သီဟိုဠ်သို့သွားရောက်ကာ အင်္ဂလိပ်စာ၊စကားကို သင်ကြားခဲ့ပြန်သည်။ ကျန်းမာရေးချူချာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့မပြန် ဇွဲကောင်းကောင်းဖြင့် လေ့လာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရပ်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ရိုမန်ကက်သလစ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးအိမ်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းများရှိသောအရပ်ဖြစ်သောကြောင့် ဆွေးနွေးရန်ကိစ္စများရှိခဲ့လျှင် လိုအပ်မည်ထင်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်မှတ်ခဲ့သည်။  ထိုမဒရပ်မြို့၌ သီယိုဆိုဖီအသင်းစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိ၏ ။ အသင်းဝင်ဖြစ်ရန် ခွင့်တောင်းခံပြီး အစပိုင်း၌ ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ချေ။ ရန်ကုန်မြို့၏ သီယိုဆိုဖီအသင်းခွဲမှ အကြောင်းကြားကူညီသောကြောင့် အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အသင်း၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သီဟိုဠ်နိုင်ငံသား Mr. C. A. Jinaraj အကူအညီဖြင့် စာကြည့်တိုက်မှူးဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုခွင့်ရရန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း အခွင့်ရလျှင် ပြောဆိုရန်၊ ပိဋိကတိုက်မှူး(စာကြည့်တိုက်မှူး) ပညာရယူရန်တို့ဖြစ်ပေသည်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာပြည်စာသင်တိုက်ကြီးများတွင် ကျမ်းစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို အစီအစဉ်မကျဘဲထားရှိသဖြင့် လိုအပ်သောအခါ ရှာဖွေရခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
လန်ဒန်မြို့သည် ၁၉၃၉ စက်တင်ဘာ၌ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဒဏ်ခံစားရ၏ ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော မြန်မာနိုင်ငံက ပညာသင်သူများ နေရပ်သို့ပြန်ကြသော်လည်း အရှင်သေဋ္ဌိလကားမပြန်ခဲ့ပေ။ အရှင်အာဒိစ္စဝံသကလည်း ပြန်ရန်စီစဉ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရည်ရွယ်ချက်မပြီးမြောက်သေးသဖြင့် လန်ဒန်၌ ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ စစ်ကြီးသည် ဆိုးရွားသထက်ဆိုးရွာလာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်း အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့သည်။  ဤသို့ခေါင်းမာစွာ ဆက်လက်နေခဲ့သော်လည်း အရှင်သေဋ္ဌိလထံတွင် နေစားစရိတ်မရှိ ပြတ်လတ်သွား၏ ။ အိမ်လခနောက်တစ်ပတ်စာပေးစရာမရှိ၊ ထိုနေ့ဆွမ်းအတွက်ငွေသုံးပြီး နောက်တစ်နေ့အတွက် ဘာမျှမရှိတော့သည်အထိဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ နှင့် သစ္စာတရားတို့ကို အာရုံပြု၍ သစ္စာဆိုခဲ့သည်။
သိကျွမ်းမိခဲ့သော ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ကုတ်သည် နေ့လယ်မတိုင်မီ (၁၁)နာရီ၌ ရုတ်တရက် ရောက်ရှိလာပြီး အကျိုးအကြောင်းမေးလေရာ အခက်ခဲရှိမှန်းသိသဖြင့် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၌ နေ့ဆွမ်းလိုက်ကြွေးသည်။ ထို့နောက် ၎င်းနေထိုင်ရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေသည်။ လန်ဒန်၌ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများခံရသောအခါ ထိုခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးကပင် ဆမ်းမားဆက်(Somerset) ကျေးလက်သို့ ခေါ်ဆောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ခိုင်းရန် အစေခံတစ်ဦး၊ အခန်းတစ်ခန်းပေး၏ ။ စစ်မပြီးမချင်းနေနိုင်ပါသည်ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓကျမ်းစာများကို အလွန်နှံ့နှံ့စပ်တော်မူသော မြောင်းမြဆရာတော်၊ ယခု အရှင်သေဋ္ဌိလ၏ ဖြစ်တော်စဉ်မှတ်တမ်းရေးသူ အရှင် ဉာနိကမှ ယခုလို သုံးသပ်၏ ။
ထိုအိမ်သည် အိမ်ကြီးရခိုင်မျိုးဖြစ်၏ ။ ယင်း၌ အလကားနေရသည်ကို အရှင်သေဋ္ဌိလကား စိတ်မသန့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝိနည်းလည်းမဖောက် သင့်တော်သည့်ဘက်၌ ဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဥပမာ။ ။ စစ်လေယာဉ်များလာသောအခါ လျှပ်စစ်မီးများပိတ်ပေးခြင်း၊ ခြံကြီးအတွင်း အမှိုက်ကောက် သန့်ရှင်းစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း စသဖြင့်ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။ ထို၌ နေစဉ် စစ်၏ အကျိုးဆက် ဒဏ်ရာရလူနာများကို သူနာပြုစုပေးခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပေသည်။ ဤအလုပ်ကား မြတ်ဗုဒ္ဓအဆူဆူချီးမွန်းသော အလုပ်၊ မေတ္တာဂရုဏာကို လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရသော အလုပ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် အရှင်သေဋ္ဌိလမှာ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်ကုတ်၏ ထိုအိမ်ကြီး၌ ငါးလကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ပေသည်။ 
စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသောအခါ ဆရာတော်မှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း အကူညီအထောက်အပံ့များဖြင့် တရားဟောပြောမှုများပြန်လည် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရာ အလုပ်သမားများပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း(the Workers' Educational Association)၏ အဖွဲ့ဝင်များတစ်ဦးခြင်းဆီသို့ တရားဟောပြောမှု (၁၇)ခုကို နှစ်ပိုင်းခွဲ၍အတွဲလိုက် ဟောပြောမှုများလည်းပါခဲ့လေသည်။ ဆေးရုံမှလူနာများဆီသို့၎င်း အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းကျသူများ ဆီသို့၎င်း သွားရောက်ခဲ့သည်။ အကူညီအချိတ်ဆက်တစ်ချို့မှနေ၍ စာသင်ကျောင်းတစ်ချို့သို့လည်း လေ့လာသွားရောက်ကာ တရားဟောပြောမှုများရှိခဲ့၏ ။ 
ဟောပြောရသည်မှာ ဗြိတိသျှ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဟန်းဖရေး၏ စီစဉ်မှုဖြင့်ဖြစ်လေသည်။ အစီအစဉ်အတိုင်း ဟောပြောရသည်။ ကြာလာသောအခါ ဟန်းဖရေး၏ စီစဉ်မှုအောက်မှဟောပြောရသည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာဒကာ ဒကာမများက မနှစ်သက်ဘဲရှိလာ၏ ။ ထို့ကြောင့် အရှင်သေဋ္ဌိလအတွက် နေထိုင်မှု၊ ဆွမ်းစသည်များ ပြေလည်နိုင်စေရန် မြန်မာသံရုံးမှသူများသည် မြန်မာကျောင်းတိုက်တစ်ခုဖြစ်မြောက်စေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ၏ ။ သို့သော် အထမမြောက်ခံ့ပါ။ 
ဓမ္မတရားနှင့်ပတ်သတ်၍ ဆရာတော်၏ အထူးချွန်ဆုံးအချက်မှာ အဘိဓမ္မာအကျဉ်းဖြစ်သည့် အဘိဓမ္မ သင်္ဂ္ဂဟအား ဗုဒ္ဓအဆုံးမကိုစိတ်ဝင်စားသူများနှင့် အဘိဓမ္မာပိုင်းကို ကိုင်တွယ်သင်ကြားပေးရန်အထူးတောင်းဆိုသူများသို့ စတင်သင်ကြားပို့ချ၍ အနောက်တိုင်းသို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။  ပါဠိသင်တန်းများ၊ နိကာယ်သင်တန်းများ၊ အဘိဓမ္မာသင်တန်းများကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ပို့ချပေးတော်မူခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တက္ကသိုလ်အဓိပတိ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုနှင့် တရားသူကြီးချုပ် ဦးသိမ်းမောင်၊ ဆာ ဦးသွင် စသည့် လူကြီးများဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှုအရ အဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုတက္ကသိုလ်တွင်ပို့ချမည်။ သို့ရာတွင် ပို့ချနိုင်သောဆရာမရှိဖြစ်၏ ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဘိဓမ္မာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပို့ချရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒဿနိကဗေဒ ဌာနမှူး ဦးလှဘူးက ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်တက္ကသိုလ်တွင်မျှ အဘိဓမ္မာမသင်ကြားကြဟူ၍ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုကန့်ကွက်မှုမှာ အရာမထင်ခဲ့ပေ။ ဆက်စပ်ရာဖြင့် အရှင်သေဋ္ဌိလကို သတိပြုမိ၍ ပင့်လျှောက်ကြသည်။ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာထင်အောင်က တရားဝင်ပင့်စာပို့ခဲ့သည်။  မကြာခဏဆိုသလိုဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရသည့် ဆယ်လေးနှစ်တာအချိန်ကာလ ပြီးနောက် ဆရာတော်၏ ရန်ကုန်သို့ထွက်ခွာသွားခြင်းကား အင်္ဂလိပ်တပည့်ကျောင်းသားများဘဝထဲ၌ အစားထိုးမရသောကွက်လပ်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့လေသည်။ သို့သော် ဆရာတော် အစမှစ၍ သင်ကြားပေးခဲ့သည့် အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို ပြန်လှန်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရင်း သင်တန်းကို ဆက်လက်ဖွင့်ခဲ့လေသည်။ 
စစ်ကာလအတွင်းမှစတင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ဝင်စားသောသူများကို တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း အစုအဖွဲ့ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပို့ချပေးခဲ့ရသည်။ အရှင် သေဋ္ဌိလ၏ ရှင်းလင်းကျွမ်းကျင်စွာ သင်ကြားပေးမှု၊ ဟောပြောမှုတို့ကြောင့် နားထောင်သူများသည် တစ်ခေါက်နား​ထောင်ပြီးလျှင် နောက်တစ်ခါလာချင်နေတော့သည်။သင်ကြားရာ၌ ချားလ်စ် ဒူရိုင်ဆဲလ် (Charles Duroiselle)၏ ပါဠိ လက်တွေ့သဒ္ဒါကျမ်း (A Practical Grammar of the Pali Language) နှင့် သီဟိုဠ်ဆရာတော် ဗုဒ္ဓဒတ္တရေးသော ပါဠိသင်ရိုးသစ် စသည်များကို အခြေခံသင်ကြားပေးသည်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နှင့်တွဲဖက်၍ ဖတ်စေသည်။ ပါဠိဝါကျရှည်များကို ခွဲခြားပြသ၍ ဝါကျတိုများလုပ်ပြခြင်း၊ သဒ္ဒါဆိုင်ရာ ပုဒ်များကို ရှင်းလင်းပြသခြင်း စသဖြင့် ထိုသို့သောနည်းစနစ်များဖြင့် သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မဇ္ဈိမနိကယ်မှ စာပေများ၏ သဒ္ဒါများ၊ အဓိပ္ပာယ်များရှင်းပြခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာအုပ်တစ်ချို့ကို ဖတ်ခိုင်း၍ ထိုဘာသာပြန်တွင် လိုနေသည့်နေရာများ၊ ပိုနေသည့်နေရာများကို ထောက်ပြခြင်း၊ တိကျသောဘာသာပြန်မှုလိုချင်လျှင် ဤသို့ပြန်နိုင်ကြောင်း၊ ဤသို့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။ သင်တန်းသား/သူများသည် ပါဠိစာပေလောက်သင်ကြားရခြင်းကို အားမရဖြစ်ကြ၏ ။
ပါဠိသင်တန်းမှ အဆင့်မြင့်လာသူများအတွက် နိကာယ်သင်တန်းလည်းပို့ချပေးရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပထမတွင် မရှည်မတိုရှိသော မဇ္ဈိမနိကယ်မှစတင်၍ သင်ကြား၏ ။ အဆင်မြင့်လာသောအခါ ဒီဃနိကာယ်ကို သင်ပေး၏ ။ နိကာယ်သင်တန်းသို့ လာရောက်နားထောင်သောသူ များပြားလာသကဲ့သို့ ပါဠိစာပေသင်တန်းသားများလည်း တိုးတက်များပြားလာသည်။ ထိုသင်ကြားပေးသော နိကာယ်မှ သုတ္တံများမှတဆင့် ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလ၏ လူတန်းစားများ၊ နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် ဓလေ့ထုံးစံ၊ ထိုခေတ်ကာလ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတို့ကို သိရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းတက်သူများမှာ စုံလင်ပါသည်။ ပို့ချသင်ကြားရာတွင် အနတ္တသဘောကို လက်မခံသူများလည်းရှိ၏ ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များလည်း စိတ်ဝင်စားသဖြင့် လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ သင်တန်းတက်ခြင်းများလည်းရှိ၏ ။ နိကာယ်ကို သင်ကြားရာ၌ ရံခါတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းမြင်သာစေရန် အဘိဓမ္မာသဘောများကိုဆက်စပ်ရှင်းပြခဲ့ရသည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်တန်းတက်သူများမှပင် အဘိဓမ္မာကို သင်ကြားခဲ့ချင်လာသည်။ 
၁၉၅၉ခုနှစ်တွင် မစ်ချီကန်တက္ကသိုလ်(the University of Michigan, U.S.A)မှ အာရှလေ့လာမှုအဖွဲ့၏ အမေရိကတခွင်တွင် စာသင်ကြားပေးပါရန် ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံခဲ့လေသည်။ တပည့်ဒါယကာ လိုက်ပါခြင်းမခဲ့ပေ။ ဆရာတော်၏ ယင်းတက္ကသိုလ်၌ The Practice and Meaning of Buddhism ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပို့ချခဲ့သည်ကို သတင်းစာကြီးတစ်စောင်က ဆရာတော်ဟောပြောချက်ကို ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့၏ ။ ထိုစာသားအချို့ကို အရှင်ဉာနိက၏ မြန်မာဘာသာပြန်တစ်ချို့မှာ :
ထိုနှစ်များအတောအတွင်း ဩစတြေးလျသို့ ကြွရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားမှုသုံးခုကိုလည်းလက်ခံခဲ့သည်။ တရားထိုင်ခြင်းအကျင့်နှင့် ဓမ္မပဒလေ့လာမှုကိုလည်း ဆရာတော်သည် စိတ်အားထက်သန်စွာရှိခဲ့၏ ။ ဂျပန်သို့သွားရောက်ကာ ဇင်ကျင့်စဉ်တရားထိုင်သူများကို လေ့ကျင့်ပေးပုံ နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာနိုင်ခဲ့ခြင်း၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ခြင်းစသည့် အခွင့်အရေးတို့ရရှိခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် စင်္ကာပူ နှင့် ဟောင်ကောင် နှစ်နိုင်ငံသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့သေးသည်။ သီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါလ်၊ ထိုင်းသို့လည်းကြွတော်မူခဲ့သည်။
၁၉၆၄၌ ဆရာတော်၏ အဘိဓမ္မာကျောင်းသားနှစ်ဦး၏ တိုက်တွန်းမှုဖြင့် အဘိဓမ္မာတရားတော်ဆက်လက်သင်ကြားပေးရန် အင်္ဂလန်သို့ကြွချီတော်မူခဲ့၏ ။ ဤသို့ကြွရောက်သင်ကြားပေးခြင်းပုံစံသည် ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကို အခြေခံပါသည်။ ပါဠိမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆိုသည့် ဝိဘင်း (ပါဠိ-ဝိဘင်္ဂ)ကျမ်းကို ပထမဆုံးအနေဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်၏ ။ ၁၉၆၉တွင် ပါဠိစာပေအသင်းကြီးက အကျယ်သုံးသပ်ဝေဖန်နည်း စာအုပ် (The Book of Analysis) အမည်ဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အရှင် ဉာနိက (၁၉၉၀). ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ပထမကျော် - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ဆရာတော်အရှင် သေဋ္ဌိလ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်နှင့် ကမ္ဘာ့သာသနာပြုမှတ်တမ်း. ရန်ကုန်: ပျော်ဘွယ်ဦးတင်အောင် (ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အသင်း -ရန်ကုန်)။ (Cited as ကမ္ဘာ့သာသနာပြုမှတ်တမ်း)
↑ Christmas Humphreys (21 November 2005). A Popular Dictionary of Buddhism. Routledge, 233–. ISBN 978-1-135-79746-1။
↑ Charles Duroiselle (September 2010). A Practical Grammar of the Pali Language. Kessinger Publishing. ISBN 978-1-165-98652-1။
↑ Ambalaṅgoḍa Polvattē Buddhadatta (1956). The new Pali course. Colombo Apothecaries' co.။
↑ Anuruddha (1975). A Manual of Abhidhamma: Being Abhidhammattha Sangaha of Bhadanta Anuruddhācariya. Buddhist Publication Society။
↑ Kenneth W. Morgan (1956). The Path of the Buddha: Buddhism Interpreted by Buddhists. Motilal Banarsidass Publ., 67–. ISBN 978-81-208-0030-4။
↑ (1995) The Book of Analysis (Vibhanga): The Second Book of the Abhidhamma Pitaka. Pali Text Society။
↑ Ashin Thittila (1996). A Buddhist's Companion: An Exposition and Selected Quotations of Ashin Thittila. Sukhi Hotu။
↑ Ashin Thittila (1996). Essential Themes of Buddhist Lectures Given by Ashin Thittila. Department of Religious Affairs။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သေဋ္ဌိလ၊_အရှင်&oldid=536804" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။